Maxaad kala Socotaa Khatarta Qaniinyada Masaska iyo Noocyadooda kala duwan. – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Maxaad kala Socotaa Khatarta Qaniinyada Masaska iyo Noocyadooda kala duwan.
Qoraalkan Waa Qormo muhiim ah ee kaga Bogo lana sii wadaag Dadka kale.
Masku(Snake) waxa lagu tiriya xayawanada cuna hilibka, waxu leyahay dherer, malahan lugo laakin waxa dhici kara inay masasku qaar kamida yeeshaan lugo sida, kan lagu magaaco bayton(Python). Waxa laga heli kara bad iyo bariba(Kaymaha iyo lamadeganada).
✔.Masasku waxay isugu jiraan qaar udhaqaaqa ugaadh(Hunting), halka qaarkalana aysan udhaqaqin inay wax ugadhsadan ayaga oo isticmaalaya xeelado sida inay iskuqariyaan dhulka lamadaganka ah oo halkasi kusugaan waxay cuni lahaayeen.
Maska ugu yar waxa lagu magacaabo tareed isnake(Thread Snake) micna ahaan aytahay maskii dunta, maskani waxu cuna sida beeda/ukunta, qudhanjada iyo cayayaanka halka bayton iyo Anakondas(Anacondas) ay kamidyihin masaska waweyn waxayna cunaan sida deerada, dofarada, Jiirka/doliga, kaluunka iyo raha i.w.l.m. masaskani waxay leeyihiin murqo(Muscles) aad uxoogan una fududeeya liqitanka marka ay xayawaanadani cunayaan.
✔.Maxey kasamaysan tahay sunta uu masku isticmaalo? Ilaa imisa nuuc ayey noqonkarta?
Sunta ay isticmalayan masasku waa candhuf dorsontay, waxay kacabisa dhefshiidka, waxay kasamaysan tahay waxyabo kaladuwan, hadan isticmaalo eraybixin fudud waa barotinis kaladuwan, waxana loqaybiya ilaa 4nuuc kala ah:
1.Qaar sababa inay waxyeelo ugaystaan nudayasha jidhka
2.Qaar sababa dhiigbax aan laga arkayn dibada
3 Qaar waxyeelo ugaysanayo Habdhiska Daremayasha
4.Qaar waxyeelo ugaysanayo wadnaha
✔..Labada famil ee ugu qatarta badan masasku maxay yihin?
Waxa jira 2 famil kamid ah masaska ay yihiin kuwa ugu halista badan:
1.kan kobaad – waxa lagu magacaba Elapid famili, waxa kamida kobraha
2.Kan labaad – waxa lagu magacaba Vaybar famili (Viper family) waxa kamida ratal isnek(Rattlesnake) waa kan ay somalidu utaqaano Abeeso.
F.G. Masaska sunta leh waxaa lagu qiyaasa kudhowaad 400 ilaa 3,000 nuuc inay yihiin Dunida oo idil,
✔..Maxan ku aqonsada qaninshaha maska?
Calaamadaha guud ee lagu aqoonsan karo qof uu qaniinay mas waxay noqon karan:
1.Inaad aragto labo dhaawac daldalool leh iskuna dhow
2.Inaad ku aragto Barar iyo casaan hareeraha nabarka/dhawaca
4.Neefsashada oo dhib kunoqota
5.Lallabo iyo matag
7.Dhidid iyo dhareer
8.Wajiga iyo lugaha oo kabubyoda
Calaamadaha lagu arki karo qofka ay qaniinto maska looyaqano Abeeso:
1.Xanuun aad udaran
2.Isha baalkeeda oo hoos udhaca
3.Cadaadiska dhiiga oo hoos udhaca
5.Daal/Murqaha oo dabca
Calaamadaha lagu arki karo qofka uu qaniino maska Kobraha(Cobra)
1.Xanuun soo degdega oo sa’id ah
2.Maqaarka oo badelma
3.Qofka inuu shook galo
4.Cadaadiska dhiiga oo hoos udhaca
✔..Gargaarka degdega ah ee loosamaynayo maxuu yahay?
Qofka hadii uu qaniino mas waxaa muhiim ah in loo dedejiyo isbitaalka kugu dhow waayo waa xaalad degdeg ah(Emergency situation) laakiin, waxa jira wax yaabo lobahan yahay in loo qabto dhibanaha kahor goob caafimaad, waxa kamida sida:
1.In lalaxidhiidho goob caafimaad.
2.In xaalada bukaanka ladajiyo, lagana yareeyo dhaqdhaqaqa, waayo dhaqdhaqaqa badan waxu fudeydinaya inay sunta kufafto jidhka intisa kale.
3.Hadii bukanku xidhanyahay dharkudhegan mise wax yabo kale caburinayo kasaar, sababto ah eeriyada kuharaysan halka uu masku qaninay waxay ubadan tahay in ay bararto.
bukaanku Ha u ogolan in uu lugtisa kusocdo, kuqaad gaadhi mise waxyabo kale aan ahayn socod.
5.Hadii aad awoodo maska soosawir, si loo ogaado nuuca uu yahay, waqti ha’isaga lumin inaad ugaadhsato mise disho maska, hadii ay arintaasu dhalinayso in bukaanka ladayaco.
✔..Quraafaadka laga aminsanyahay gargaarka degdega ah
Waxa jira xirfadooyin hore ah oo ay dadka qaar isticmaalan marku qofku qanino maska, xirfadoyinkasi ma’ahan kuwa wax utarayo dhibanaha, waxaba dhici karta in ay waxyeelo ugaysato.
1.Halka uu masku qaniinay ha xidhin
2.Dhawacu masku sababay hajarin
3.Hasaarin nabarka waxyaabo qabo ah sida barafka
4.Dhaqtar la’an dhibanuhu hasin dawoyin
Hajaqin/nuugin eeriyada masku qaniinay
✔..Sidee loga hortaga?
Waxa fiican inaad kafogaato mise kafeejignato meelaha ay masasku galan/kubadanyihin sida howdka iyo buuraha.
Qore dr aaamin
Previous articleDaraasad cusub oo shaaca ka qaaday “hab fudud” oo lagu dheereeyo nolosha aadamaha
Next articleWasiirka Warfaafinta Somaliland oo si Adag ugu Jawaabay Dr Gaboose